Kunzima ukucabanga umuntu wesimanje ngaphandle imoto, okuyinto lula kakhulu ekuphileni. Kodwa nansi ukuthengwa / ukudayiswa ephelezelwa ethwele isitaki samaphepha, wachitha isikhathi, imali nezinzwa. Lapho iRussia waphuphuma izimoto angaphandle, abantu baye bathola ikhanda omkhulu. Phela, ngokomthetho Russian egumbini lenjini, emzimbeni, VIN nenye idatha abaningi ukuba esibhaliwe TCP. Kodwa automakers angaphandle bakholwe ICE umshini esikhundleni izingxenye. abakhiqizi Western kwegumbi injini isetshenziswa kuphela inkonzo, kuba ngokuphelele akudingekile ukuhlonza. Akafuni afakwe imibhalo kwi imoto futhi banesithakazelo ngokuhamba kwesikhathi kuphela Shopper. Ukuba wayedinga ukucacisa izici izingxenye ezisele for motor.
Ngakho, ake sibone, khona uku inombolo imoto yenjini, futhi kungani kudingeka ke. Ngokuvamile, abakhiqizi silisebenzise izakhi ephambili we motor umshini. izinkinga eziphawulekayo Kuyaphawuleka ukuthi zonke imoto isitshalo imibono yabo mayelana nokuthi inombolo yenjini kufanele kube. indawo yayo ngokuvamile lelipelwe e imiyalelo iyunithi. Uma imoto awathengiwe salon, njengoba umuntu yangasese, ungathola iziqondiso ku-intanethi. Uma egalaji kuwufanele umkhiqizo imboni yasekhaya yezimoto, lapho kufanele ufune inombolo yenjini? umkhonyovu a VIN, inombolo chassis kanye injini in the abashayeli wendawo eside kwaziwa. Amanye awo yilawa:
VIN isendaweni mudguard phambi lontamo, it is sebekopishelwa ebhuthini phansi (futhi ngakwesokudla);
ku uwoyela lemifanekiso, ngqo block isilinda (ngakwesokunxele) egumbini injini ibekwe;
wokugcina amadijithi eziyisikhombisa VIN zibaliwe umzimba.
Kungani sidinga egumbini lenjini? Yena, njengoba kuye kwashiwo, lilondolozwe Ingxenye semoto. Par nenombolo umzimba, kubalulekile ukukhomba imoto (ikakhulukazi, ukuba lula ukuphenywa kokuphulwa amacala okweba). Ngaphezu kwalokho, i-Russia akuvunyelwe ukushintsha design of the imoto ngaphandle kwemvume ngumkhiqizi. Ngakho, inani etholakalayo njalo liqiniswe ipasipoti iyunithi kufanele zifane (Yiqiniso, uma injini engashintshwa).
nokubuyisana kwaba oyisicefe nezinombolo umnikazi imoto, futhi umhloli omgwaqo. Ngezinye izikhathi kuthatha amahora ambalwa ngoba umhloli abakwazi ukuthola inombolo injini. ukukhathazeka Western, njengoba kuchaziwe ngenhla, musa unamathisele ukubaluleka kakhulu kule sethi izinombolo. Ngakho-ke, ibekwe ngaphansi hood ka imoto ezindaweni ezahlukene, kodwa hhayi evikelwe emathonyeni angaphandle. Kusukela ngo-April 2011 imoto Russian sima-registration number isheke injini. Kukhanseliwe futhi umlando wakhe emaphepheni yokubhaliswa imoto. Ngaphezu kwalokho, inqubo ukususwa kusukela irejista ngokwayo lula futhi ayidingi khona kumnikazi, wenziwa ngokuzenzakalelayo. Lapho ukuthengisa imoto umuntu ahlala endaweni efanayo, awukwazi ukushintsha ungcwecwe ilayisensi.
Yiqiniso, ekuqaleni unenkinga kulokhu kwehlukana we okumunyethwe kusisekelo umthetho. abanikazi abaningi imoto bakhononda ngokuthi MREO namanje buyisana izibalo zabo. Kodwa manje isimo ibonakala evamile.
Ikhava Valve gasket: isakhiwo, umsebenzi kanye esikhundleni
Delicious imbewu sunflower. Benefit kanye nokulimala emzimbeni.
Isitofu se-oven: izinhlobo, incazelo. Isitofu esinezandla zakho